Twitter ဝနျထမျးဟောငျးနှဈဦး ဆျောဒီအာရေးဗအြတှကျ သူလြှိုလုပျပေးမှုဖွငျ့ အမရေိကနျတှငျ တရားစှဲဆိုခံရ | Akonthi
Twitter ဝနျထမျးဟောငျးနှဈဦးတို့သညျ ဆျောဒီအာရေးဗနြိုငျငံအတှကျ သူလြှိုလုပျပေးကွောငျး ယုံကွညျရသညျ့ အတှကျ ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ ဆနျဖရနျစစ်စကိုခရိုငျဖကျဒရယျရုံးတျော၌ တရားစှဲဆိုခွငျးခံရသညျဟု CNN က ယနေ့ ရေးသားသညျ။
အလီအယျဇာဘာရာအမညျရှိ ဆျောဒီနိုငျငံသားနှငျ့ အာမကျ အဘူယာနိုအမညျရှိ အမရေိကနျနိုငျငံသားတို့သညျ ထငျရှားသော လူမှုကှနျရကျကွီး၏ စနဈအတှငျး ဝငျရောကျခှငျ့ ရရှိထားသူမြားဖွဈသညျ။ ၎င်းငျးတို့သညျ အဆိုပါ လုပျပိုငျခှငျ့ကို အသုံးခလြှကျ ဆျောဒီအစိုးရအားဆနျ့ကငျြသော Account မြားစှာတို့၏ လြှို့ဝှကျသတငျး အခကျြမြားကို ရယူခဲ့ကွကွောငျး စှပျစှဲခွငျးခံရခွငျးဖွဈသညျ။
ယခုအမှုမှာ ဆျောဒီအစိုးရအနဖွေငျ့ ၎င်းငျးတို့အစိုးရအပျေါ အှနျလိုငျးပလကျဖောငျးအား လကျနကျသဖှယျ အသုံးပွုဆနျ့ကငျြသူတို့အား အဝေးမှ ထိနျးခြုပျရနျအားထုတျလြှကျရှိကွောငျး ထငျထငျရှားစခေဲ့သညျ။ ထို့ပွငျ Twitter အနဖွေငျ့လညျး ပလကျဖောငျးအသုံးပွုသူမြား၏ ပုဂ်ဂိုလျရေးဆိုငျရာအခကျြအလကျတို့ကို ကာကှယျရာ၌ စစေ့ပျသခြောမှုနညျးလမျးအခြို့အသဈပွဋ်ဌာနျးရတော့မညျဖွဈကွောငျး ပွသလြှကျရှိသညျ။
ဆျောဒီထောကျလှမျးရေးတို့ စညျးရုံးထားသညျ့ စှပျစှဲခံရသူမြားသညျ Twitter ၏ အတှငျးပိုငျးစနဈသို့ ဝငျရောကျ ခဲ့ကွသညျ။ ဆျောဒီနိုငျငံရေးဝဖေနျသူမြား၊ Follower အမွောကျအမွားရှိသူမြားနှငျ့ အခွား Twitter အသုံးပွုသူ Account ထောငျပေါငျးမြားစှာတို့၏ ပုဂ်ဂိုလျရေးဆိုငျရာ သတငျးအခကျြအလကျမြား၊ အီးမေးလျမြားနှငျ့ အသုံးပွုသူ၏ တညျနရောကို သိရှိနိုငျသညျ့ I.P. Address တို့ကို ဆျောဒီအစိုးရအတှကျ စုဆောငျးပေးခဲ့ကွောငျး စှပျစှဲခွငျး ခံရသညျဟု ဆိုသညျ။
တညျဆဲတရားဥပဒအေရ အမရေိကနျကုမ်ပဏီမြားအပျေါ ဥပဒမေဲ့ ပွညျပထိုးဖောကျမှုမြားမှ အကာအကှယျ ပေးထားသညျ။ အမရေိကနျကုမ်ပဏီ သို့မဟုတျ နညျးပညာတဈရပျအပျေါ ပွညျပလှမျးမိုးထိနျးခြုပျခွငျးမှာလညျး ဥပဒခြေိုးဖောကျခွငျးအဖွဈ မှတျယူပွဋ်ဌာနျးထားသညျ။
အာမကျအယျလူတာရီ အမညျရှိ အခွားဆျောဒီနိုငျငံသားမှာ ဆျောဒီအစိုးရနှငျ့ Twitter ဝနျထမျးနှဈဦးတို့အကွား ဆကျသှယျဆောငျရှကျပေးသညျဟု စှပျစှဲခွငျးခံရသူဖွဈသညျ။ ၎င်းငျးသညျ Twitter ဝနျထမျးတို့အား တနျဖိုးကွီး လကျပတျနာရီနှငျ့ တဈဦးလြှငျ အမရေိကနျဒျေါလာ သိနျးခြီပေးအပျခဲ့သညျဟု ဆိုသညျ။
ယခုကဲ့သို့ အခကျြအလကျမြားရယူရနျ သူလြှိုလုပျမှုတှငျ ပါဝငျပတျသကျသော ဆျောဒီအရာရှိမြား၏ အမညျကို မသိရှိရသျောလညျး အိမျရှမေ့ငျးသား မိုဟာမကျဘငျဆယျလျမနျ၏ အတှငျးစညျး လူယုံအရာရှိကွီးမြား ဖွဈကွောငျး Washington Post က ရေးသားသညျ။
၎င်းငျးတို့ ၃ ဦးစလုံးကို ပွညျပအစိုးရ၏ တရားမဝငျအေးဂငျြ့အဖွဈ ဆောငျရှကျမှုဖွငျ့ တရားစှဲဆိုထားသညျ။ ၎င်းငျးတို့ အနကျ အမရေိကနျနိုငျငံသားမှာ ငှတေောငျးခံလှာ အတုပွုလုပျမှုဖွငျ့ FBI က ဖမျးဆီးစဈဆေးလြှကျရှိစဉျ ယခုကဲ့သို့ တရားစှဲဆိုခံရခွငျးဖွဈသညျ။
Twitter ၀န်ထမ်းဟောင်းနှစ်ဦး ဆော်ဒီအာရေးဗျအတွက် သူလျှိုလုပ်ပေးမှုဖြင့် အမေရိကန်တွင် တရားစွဲဆိုခံရ
Twitter ၀န်ထမ်းဟောင်းနှစ်ဦးတို့သည် ဆော်ဒီအာရေးဗျနိုင်ငံအတွက် သူလျှိုလုပ်ပေးကြောင်း ယုံကြည်ရသည့် အတွက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုခရိုင်ဖက်ဒရယ်ရုံးတော်၌ တရားစွဲဆိုခြင်းခံရသည်ဟု CNN က ယနေ့ ရေးသားသည်။
အလီအယ်ဇာဘာရာအမည်ရှိ ဆော်ဒီနိုင်ငံသားနှင့် အာမက် အဘူယာနိုအမည်ရှိ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတို့သည် ထင်ရှားသော လူမှုကွန်ရက်ကြီး၏ စနစ်အတွင်း ၀င်ရောက်ခွင့် ရရှိထားသူများဖြစ်သည်။ ၄င်းတို့သည် အဆိုပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အသုံးချလျှက် ဆော်ဒီအစိုးရအားဆန့်ကျင်သော Account များစွာတို့၏ လျှို့ဝှက်သတင်း အချက်များကို ရယူခဲ့ကြကြောင်း စွပ်စွဲခြင်းခံရခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုအမှုမှာ ဆော်ဒီအစိုးရအနေဖြင့် ၄င်းတို့အစိုးရအပေါ် အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းအား လက်နက်သဖွယ် အသုံးပြုဆန့်ကျင်သူတို့အား အဝေးမှ ထိန်းချုပ်ရန်အားထုတ်လျှက်ရှိကြောင်း ထင်ထင်ရှားစေခဲ့သည်။ ထို့ပြင် Twitter အနေဖြင့်လည်း ပလက်ဖောင်းအသုံးပြုသူများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တို့ကို ကာကွယ်ရာ၌ စေ့စပ်သေချာမှုနည်းလမ်းအချို့အသစ်ပြဋ္ဌာန်းရတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြသလျှက်ရှိသည်။
ဆော်ဒီထောက်လှမ်းရေးတို့ စည်းရုံးထားသည့် စွပ်စွဲခံရသူများသည် Twitter ၏ အတွင်းပိုင်းစနစ်သို့ ၀င်ရောက် ခဲ့ကြသည်။ ဆော်ဒီနိုင်ငံရေးဝေဖန်သူများ၊ Follower အမြောက်အမြားရှိသူများနှင့် အခြား Twitter အသုံးပြုသူ Account ထောင်ပေါင်းများစွာတို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ၊ အီးမေးလ်များနှင့် အသုံးပြုသူ၏ တည်နေရာကို သိရှိနိုင်သည့် I.P. Address တို့ကို ဆော်ဒီအစိုးရအတွက် စုဆောင်းပေးခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲခြင်း ခံရသည်ဟု ဆိုသည်။
တည်ဆဲတရားဥပဒေအရ အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများအပေါ် ဥပဒေမဲ့ ပြည်ပထိုးဖောက်မှုများမှ အကာအကွယ် ပေးထားသည်။ အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် နည်းပညာတစ်ရပ်အပေါ် ပြည်ပလွှမ်းမိုးထိန်းချုပ်ခြင်းမှာလည်း ဥပဒေချိုးဖောက်ခြင်းအဖြစ် မှတ်ယူပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
အာမက်အယ်လူတာရီ အမည်ရှိ အခြားဆော်ဒီနိုင်ငံသားမှာ ဆော်ဒီအစိုးရနှင့် Twitter ၀န်ထမ်းနှစ်ဦးတို့အကြား ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးသည်ဟု စွပ်စွဲခြင်းခံရသူဖြစ်သည်။ ၄င်းသည် Twitter ၀န်ထမ်းတို့အား တန်ဖိုးကြီး လက်ပတ်နာရီနှင့် တစ်ဦးလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သိန်းချီပေးအပ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ယခုကဲ့သို့ အချက်အလက်များရယူရန် သူလျှိုလုပ်မှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သော ဆော်ဒီအရာရှိများ၏ အမည်ကို မသိရှိရသော်လည်း အိမ်ရှေ့မင်းသား မိုဟာမက်ဘင်ဆယ်လ်မန်၏ အတွင်းစည်း လူယုံအရာရှိကြီးများ ဖြစ်ကြောင်း Washington Post က ရေးသားသည်။
၄င်းတို့ ၃ ဦးစလုံးကို ပြည်ပအစိုးရ၏ တရားမ၀င်အေးဂျင့်အဖြစ် ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသည်။ ၄င်းတို့ အနက် အမေရိကန်နိုင်ငံသားမှာ ငွေတောင်းခံလွှာ အတုပြုလုပ်မှုဖြင့် FBI က ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးလျှက်ရှိစဉ် ယခုကဲ့သို့ တရားစွဲဆိုခံရခြင်းဖြစ်သည်။